डा.पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउन लैनचौरको सिधै दवाव - Dainik Nepal
डा.पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउन लैनचौरको सिधै दवाव
दैनिक नेपाल २०७४ मंसिर २६ गते ८:३४
काठमाडौं, २६ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रमख विशेषज्ञ (बाह्रौ तह) मा कार्यरत डा.पुष्पा चौधरी मन्त्रालयको सचिवका लागि उम्मेदवार हुने भएपछि उनको दावेदारीमाथि मन्त्रालयका अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् । विवादास्पद् चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सचिव जस्तो जिम्मेवारपूर्ण पदमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई उनीहरूले खवरदारी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा.किरण रेग्मी यसै हप्ता सेवा निवृत भएपछि सरकारले छिट्टै नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको सचिवको लागि बाह्रौ तहमा कार्यरत तीन जना चिकित्सक सिफारिस हुने संभावना रहेको र उनीहरूमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषदले सचिवमा नियुक्त गर्नेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले डा. विनोदमान श्रेष्ठ, डा. सुशील प्याकुरेल र डा. पुष्पा चौधरी गरी तीन जना बाह्रौ तहमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कुनै पनि सरकारबाट तलव सुविधा लिइरहेको कर्मचारीले अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट दोहोरो तलव लिन पाइदैन् ।
तर, डा. चौधरीले जनवरी १, २०१५ देखि २०१७ डिसेम्बरसम्मका लागि तीन वर्षका लागि महिनाको डेढ लाख (१५०० अमेरिकी डलर) पाउने सर्तमा स्त्री रोग विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन फिगोसंग आफू कार्यक्रम संयोजकका रुपमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेकी थिइन् ।
उनी त्यति बेला परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक थिइन । यसका साथै उनले उक्त संस्थाको कार्यालय आफ्नै घरमा राख्ने सम्झौता गर्न लगाएर पति डा. श्रवण चौधरीलाई घरधनी बनाएर महिनाको ४० हजार थप लिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।
डा.चौधरीको यस किसिमको गैरकानूनी कार्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । मन्त्रालयले त्यसका बिषयमा जानकारी गराउन नेसोगलाई पत्र पठाएको थियो ।
डा.चौधरीले विदेशी संस्थाबाट मासिक डेढ लाख रुपैयाँ लिने गरेको पहिले उनी अध्यक्ष रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) की अध्यक्ष डा. लता बज्राचार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेकी थिइन । लामो समय प्रसूति गृहमा कार्यरत डा. चौधरी आफू त्यहाको निर्देशक भएका बेला ( सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म ) नेसोगकी अध्यक्ष समेत थिइन । त्यही बेला उनले पिपिआईयूडी नामक प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि फिगोसँग सम्झौता गरेर आफू तलवी संयोजक भएकी थिइन ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले डा.चौधरीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा परिवार स्वास्थ्य महासाखाबाट स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक बनाएर जोगाएका थिए । काठमाडौंबाट कहिल्यै बाहिर सरुवा भएर नगएकी डा. चौधरी प्रशासन चलाउन समेत असक्षम भएपछि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उनलाई विभागको निमित्त महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालय सरुवा गरेका थिए ।
महानिर्देशकबाट डा. चौधरीलाई नहटाउन त्यति बेला पूर्व मन्त्री थापालाई उनका पति डा. श्रवण चौधरीले भारतीय दूतावासमार्फत दवाव दिन लगाएको स्रोतको भनाइ छ ।
डा.चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउन लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतवासले पनि कामचलाउ सरकारलाई दवाव दिँदै आएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनञ्जिभ सिंह पुरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरालाई दवाव दिएरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
डा. चौधरीले पैसाभन्दा ठूलो केही नदेख्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकाय पनि खुशी छैनन् । डा. चौधरी निमित्त महानिर्देशक भएका बेला कर्मचारी सरुवामा करोडौ कमाएको विभागका कर्मचारी बताउछन् ।
अहिले पनि डा. चौधरी पैसाको बलमा मन्त्रालयको सचिव बन्ने सपना पालिरहेकी छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अहिले अनुभवी र स्वच्छ नेतृत्वको खाचो छ । स्वास्थ्यलाई संघियता अनुसार विस्तार गर्नु पर्ने बेला राजधानी नछोडेको नेतृत्वबाट संभव छैन । त्यसका लागि डा. चौधरी उपयुक्त पात्र होइन ।’ मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारले डा. चौधरीलाई सचिवमा बढुवा होइन, छानविन जागिरबाट बर्खास्त गरेर कारवाही गर्नु पर्ने बताए ।